Fiarovana ara-tontolo iainana
Ny fanerena dia ny dingan'ny tanora (ohatra ny trondro sy ny lava-dranomandry, ny fampielezana fanafody), ary lasa anisan'ny olon-dehibe. Ny taham-pahaizana, ny haavony, ary ny rafitra ara-tsimialam-pandaminana dia manatsara ny isan'ny mponina, ary noho izany dia misy fiantraikany manan-danja eo amin'ny sehatry ny mponina, ny fizotry ny sisin-dranomasina, ary ny faharetan'ny rafitra iray.
Dingana ho an'ny fanarenana
Fanamboarana / fametrahana fepetra
Ny modelim-pahaizana momba ny fitrandrahana amin'ny fitrandrahana coral ho an'ny benthos. Ny fisarihana eo ankavanana dia maneho ny fetran'ny mety hisian'ny fandraisana mpiasa. Ny tsipika midina dia manondro ny fivoaran'ny fahombiazana amin'ny vatohara amin'ny alàlan'ny dingana ho an'ny fandraisana mpiasa. Novaina avy amin'i Arnold et al. 2010.
Ny dingana fototra takiana amin'ny famerenana ny fahombiazana dia ny: 1) ny fahazoana ny lavenona manam-pahaizana (miankina amin'ny fifandraisana); 2) ny fahaiza-manavakavaka mametraka azy - matetika manampy amin'ny sehatra simika izay miteraka fitsaboana sy metamorphose; ary 3) ny fahazoana ny satroka fitsinjaram-pandaminana mifanaraka tsara amin'ny fivelomana ny fitsanganana amin'ny maty. ref
Ny fametrahana sy ny famerenana ny haran-dranomasina dia tsy misy raha tsy misy ny fepetra sasany, ary ny fitondrantenan'ny lava-coral dia manara-maso ny fahafahany mitoetra. Ohatra, ho an'ny lava-bato ny lava-bato, dia tokony hifindra any amin'ny faritra lalina ny lavanila, hikatso ny lanjan'ny taratra voafaritra manokana izay manohana ny fitsinjaram-pahefana. Raha vao mifandray amin'ny benthos (izany hoe, seafloor), dia misy ny zavamaniry sasany toy ny ala kôleraly manome loharano simika izay miteraka ny metamorphose sy ny korontana. ref
Tari-dalana ho an'ny mpitantana
Ny famakafakana ireto fanontaniana manaraka momba ny fanoratana dia afaka manome ny lehibeny amin'ny fahatakarana tsaratsara kokoa ny fisoratana anarana ao amin'ny tranokalany ary afaka mampahafantatra ny paikady momba ny fitantanana, toy ny fametrahana sehatra fiarovana an-dranomasina (MPA), faneriterena fanjonoana, na fitantanana rano. Ao amin'ny sary tsirairay dia misy ny fitarihana fitarihana manokana.
Inona avy ny fepetra momba ny ranomasina momba ny ranomasina?
Ny dingana ara-pahaizana momba ny ranomasina momba ny ranomasina, toy ny tondra-drano, ny toerana ambony, ary ny amnistia dia mety miteraka fihenam-bidy sy fiantraikany amin'ny fiaramanidina lavitra pelagic olitra. Ireo dingana goavambe ireo koa dia misy fiantraikany amin'ny fandraisana mpiasa amin'ny farafara kely kokoa (toerana ambony); Ny tondra-drano sy ny toeram-ponenana dia hanana fiantraikany mivantana amin'ny halehiben'ny fitaterana larval any amin'ny toerana lavitra ary ny hetsik'ireo larva eny amin'ny toerana manokana, ary dia toy izany koa ny rafitra fanoratana. Amin'ny ambaratonga kely kokoa, ny dingana ara-batana hafa dia afaka manatsara na manakana ny famaritana ny lava sy ny fifehezana ny rafitra toy ny mikrôby mikiririoka, ny fikajiana madinika, ny hazavana, ny sehatry ny famolahana, ny salinity, ny halaliny, ary ny fandotoana.
Mba hahatakarana bebe kokoa ny fizotran'ny fikarakarana ara-batana lehibe sy ny fiantraikany eo amin'ny faritra misy azy dia tokony handinika ireo tondra-dranon'ny ranomasina ao amin'ilay faritra ny mpitantana. Information on misokatra amin'ny varavarankely vaovaodranomasina ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaosamonta manome ny mpitantana ny hetsika ho an'ny hetsika ankapobeny sy ny fizarazarana ho an'ny larval.
Amin'ny fampahalalana momba ny fampandrenesana dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny habe, ny toerana ary ny halavan'ny MPA eo amin'ny tambazotra ny manampahefana. Na izany aza, ny famakafakana ny toe-pahasalamana ara-boajanahary sy ny famolavolana ny làlam-pitaterana sy ny fomba famaritana ny fampielezana ny MPA dia sehatra vaovao ary mety tena sarotra izany (Jereo Cowen, et al, 2006 sy Steneck, et al, 2009, ho ohatra momba ny fiantraikanan'ny ranomasina momba ny fitaterana an-dranomasina fanaparitahana). Mety mitaky fahaizana ara-teknika manan-danja, fidirana amin'ny modely sarotra, ary fiaraha-miasa eo amin'ireo ranomasina sy ny mpitantana.
Aiza ny loharanon-java-boahary ho an'ny tranokala?
Ny famokarana, ny fametrahana, ary ny famindrana ny larva dia miankina amin'ny fahazoana toerana. Ny loharano lavareny dia mety ho toerana ivelany, na ny loharano dia mety ao an-toerana raha toa ka mitranga eo amin'ny vatohara ny famokarana ary ny fametrahana azy. Raha any an-toerana ny loharanom-baovao, dia heverina ho mpanamboatra ny tenany ny rafitra ary tsy miankina amin'ny loharanom-bola ivelan'ny loharano ho an'ny famenoana. Ny lohahevitry ny fifanakalozana lava, ary ny halehiben'ny lanjany avy amin'ny olona avy any ivelany, dia manampy hanazava fifandraisana eo anelanelan'ny vatoharan-dranomasina. Ny famolavolan-tena maro dia mitarika ho amin'ny fifandraisana ambany, raha ny avo lenta amin'ny fifanakalozana larval amin'ny hafa kosa dia mampifandray ny fifandraisana avo lenta. ref
Ny fahazoan-dàlana hahatakatra ny fampiasana vatohara ho an'ny haran-dranomasina, toy ny misy ny loko dia avy amin'ny fototarazo. Ao amin'ny sehatry ny ecologique lava, dia nieritreritra ny mpahay siansa fa ny ampahany kely dia nentin'ny ranomasimbe ho any amin'ny toerana lavitra ny toerana nahaterahany. Na izany aza, ny fikarohana vao haingana dia manambara fa ny selan'ny trondro eny amin'ny haran-dranomasina dia manamboatra ny tenany, ary ny liona sy ny tanora dia mety hiverina amin'ny toerana naterany. ref Ireo mpanoratra dia nahita ambony noho ny efa nantenaina (mety ho avo lenta toy ny 60%) ny fizakan-tena eo amin'ny sehatry ny trondro reefatra, ary ny fianarana vao haingana ref Tohano ireo fikarohana tany am-piandohana. Hitan'ny mpahay siansa fa ny ankamaroan'ny vatohara dia mamerina amin'ny laoniny ref satria ny lava-pitombenana dia maharitra ela (andro na herinandro), ary maro amin'ireo vatohara no manakaiky kokoa ny loharano noho ny trondro reefy. ref Ny fianarana manaporofo ny fitazonana ny tanimbary eo an-toerana dia zava-dehibe satria manoro hevitra izy ireo fa ny fitahirizana an-dranomasina dia afaka manome tombontsoa ho an'ny olona an-tsitrapo, fa ao anatin'ny sisin-taniny. Ny firafitry ny haran-dranomasina matetika dia tsy miankina amin'ny tenany manokana na miankina amin'ny loharano ivelany. Ny habetsaky ny larva avy amin'ny toerana anatiny na ivelany dia afaka miovaova be sy ao anatin'ny rafitra momba ny haran-dranomasina. Raha misy voka-dratsin'ny voka-dratsin'ity fikambanana ity dia manjaka ny fiainana an-jatony amin'ny toe-javatra mampikorontan-tsaina, dia tsy dia misy fanantenana firy ny famerenana, satria ny loharanon-dranomasina rehetra dia nisy fiantraikany. Toy izany koa, ny fanarenana ny vondrom-piarahamonina coral izay miankina amin'ny loharano avy any ivelany dia miankina tanteraka amin'ny fahatongavan'ireo farantsa haran-dranomasina izay tafavoaka velona tamin'ny hetsika mahatsiravina. Ny haran-dranomasina izay manome sy mandray larva dia azo inoana kokoa ny manakorontana noho ny antony roa satria: 1) misy loharano maro ho an'ny fampivoarana sy ny 2) dia mety hampitombo ny fahasamihafan'ny fahasamihafana ara-pananahana.
Mba hanamafisana ny fanarenana avy amin'ny fanelingelenana (ohatra ny fahajambana), dia mety ho tsara kokoa ny fananana ny fampitomboana ny fizakan-tena sy ny loharanon-trosa ivelany.
Ny famerenana ny mombamomba ny mpitsoa-ponenana dia tokony hampidirina ao amin'ny protocoles fanaraha-maso eo amin'ny tranonkala mba hanampiana hamaritana ny mety ho fanasitranana ny vatohara
Ny hetsika fitantanana dia tokony alohan'ny hanohizana ny fihenan'ny biomass algal amin'ny haran-dranomasina satria ny alahelon'ny alika dia mampihena ny fivelaran'ny vatohara vao voapetraka.
Ny fitantanana ny fitantanana izay mampihena ny biomass algal vokatry ny fitrandrahana ny herbivore na ny fanasitranana (ohatra, ny fametrahana faritra tsy misy toerana, ny fanatsarana ny kalitaon'ny rano) dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fisorohana ny vatohara ary noho izany, ny fanarenana vatokely aorian'ny fanelingelenana.
Ny herbivores dia tokony horaisina amin'ny ambaratongan'ny vatohara manontolo satria ny havokavoka dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny sehatry ny haran-dranomasina. Ohatra avy amin'ny paikady fitantanana toy izany dia ahitana politika izay manaloka ny fakana ireo trondro voaangona avy amin'ny firenena iray manontolo (ohatra Bonaire, Belize) ary ny politikany izay mandika ny fanondranana trondro reefatra (ohatra, ao Palau).
Misy fonenana azo itokisana ve?
Ny fitadiavana habaka tsy misy fonenana sy fonenana sahaza ho an'ny fametrahana ny vatohara ho an'ny vatohara dia ny fizotry ny fifaninanana momba ny haran-dranomasina. Raha tsy manimba ny fonenan'ny vatohara ny toeram-ponenana, dia tsy hahomby ny famerenana.
Ny fitondran-tenan'ny Larval (ohatra, ny fitantanana ny hetsika, ny metamorphose, ary ny fametrahana), ny fepetra momba ny tontolo iainana (ohatra ny tondra-drano an-dranomasina izay mahakasika ny fitaterana larval), ary ny fahafahana sy ny karazana substrate (ohatra ny fisian'ny algoma coralline sy / na ny tsy fisian'ny macroalgae) fahaiza-miaina.
Ny karazam-pitaovan-tsoratra dia singa manan-danja iray izay mitarika ny fametrahana ny faritry ny haran-dranomasina sy ny mety ho famaritana ny rafitry ny fiaraha-monina coral. Ny fantsona, toy ny vatohara mivelona, ​​ny fandotoana, ny macroalgae, ny sponges mitentina, ary ny vovo-tsokajy tsy voatsabo, dia tsy mety amin'ny fitsaboana harena. Ny toeram-ponenana azo itokisana dia ahitana karazana ambany, fialan-tsasatra voafetra eo amin'ny tsanganana rano, ary ny tsy fisian'ny macroalgae lehibe.
Ny maha-mety amin'ny tontonana ho an'ny fambolena coral dia voafaritra amin'ny toetra simika na biolojika amin'ny tontonana. Ny fisian'ny aloeso dia mety hampihenana ny fahombiazan'ny vatohara sy ny fahombiazan'ny korontana planulae. Fikarohana vao haingana momba ny haran-dranomasina fanamboarana akorabato Montipora capitata dia nahita fifandraisana ratsy teo amin'ny ambaratongam-pitombohan'ny tantaram-piainana tany am-piandohana (1-3 polyps) sy algoma felam-bolo. Ny planulae izay miorina amin'ny faritra voajanahary dia tsy vitan'ny hijaly fotsiny amin'ny fampitomboana ny rendrarendra tsy ara-drariny, na ny ala, fa mahatsapa ihany koa ny fahombiazan'ny fananganana tsimokaretina fa ny algôle dia tsy azo atao ho toy ny fototra matanjaka ho an'ny fitomboan'ny haran-dranomasina. ref
Ny fisian'ny singa simika ao amin'ny ala karana (CCA) sy ny faritra hafa, toy ny vatoharan-dranomasina, dia naseho hamporisika ny famerenana ny haran-dranomasina. ref Ny lanjan'ny coral dia toa afaka manaiky sy manaiky ny sonia any amin'ny CCA eo amin'ny fonenan'ny toeram-ponenana. ref
Fandaharana fanaraha-maso Tokony handinika tsara ny habetsan'ny toeram-ponenana sahaza, hikaroka manokana amin'ny faritra CCA na paty amin'ny haran-koditra maty izay mety hanome ny sata mifanentana amin'ny fananganana coral vaovao.
Ny manampahefana dia afaka mampiasa ity fampahalalana ity mba hahazoana antoka fa misy faritra manana traikefa an-tsokosoko sy fari-ponenana mifanaraka tsara ao anaty faritra voaaro.
Inona ny fiangonan'ny trondro voajanahary ao amin'ilay tranokala?
Ny fambolena dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiantraikany amin'ny fifaninanana fifaninanana eo amin'ny vatohara sy ny macroalgae (izany hoe ny fambolena dia mandany algoma ary mamorona toerana ho an'ny fitsaboana haranina). Noho izany, ny fambolena sy ny fiaraha-monina amin'ny trondro voajanahary sy ny tsy fahampian-tsakafo dia afaka manova be ny famerenana ny vatohara. Ny fisian'ny trondro an-dranom-bary, toy ny parrotfish, dia afaka mampihena ny fonon'ny macroalgal ary manamora ny fandraisana mpiasa amin'ny vatohara. ref
Ny fitantanana izay natao hanatsarana ny famerenana ny vatohara dia tokony hampiditra paikady mampihena ny fako amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fikojakojana ny trondro sy ny tsy fahampian-tsakafo. Mba hanaovana izany, mila mpitantana handinika ny karazana sy ny haben'ny ahitra izay mitranga ao amin'ny faritra.
Ny fandraràna na ny famerana ny fakana ny karazana herbivorosy dia tena zava-dehibe amin'ny fisorohana ny faharetan'ny haran-dranomasina any amin'ireo faritra izay tanjon'ny fokonolona, ​​ary tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny fitantanana ny haratony amin'ny rafi-pitantanana algal.